Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.5 ကဖြစ်ပျက်ဖော်ဆောင်ရေး
သင်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်သင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက် run နိုင်ပါတယ်။ သင်ကူညီ (နှင့်အဘယ်သူသည်သင့်ကိုကူညီနိုင်) နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်လုပျနိုငျလည်းကောင်း။
ဒီပွိုင့်ခြင်းအားဖြင့်ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်လုပ်နေတာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကြီးတွေနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်လျှင်သင်ပြီးသား, ဤစမ်းသပ်ချက်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လုပ်နေခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်မူကား, သင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ကို run မရနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထိုမှားယွင်းတဲ့င်: အနည်းငယ်တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ Hard အလုပ်အတူလူတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှု run နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်အင်အားကြီးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. : ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်, နှစ်ယောက်အဓိကချဉ်းကပ်မှုများအကြားခွဲခြားရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ တဖန်သင်တို့ကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်နိုင်ပင်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်: သင်, ရှိပြီးသား enviroments မှာစမ်းသပ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်, ဒါမှမဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအောက်ကဥပမာကနေမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဤချဉ်းကပ်မှုအဘယ်သူအားမျှအားလုံးအခြေအနေများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လေးခုအဓိကရှုထောင့်တလျှောက် trade-off ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထိုသူတို့အထင်ဖို့အကောင်းဆုံးင်: ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု, သရုပ်မှန်နှင့်ကျင့်ဝတ် (ပုံ 4.12) ။
ပုံ 4.12: သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေများအတွက် trade-off ၏အကျဉ်းချုပ်။ ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်ငါအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံအသုံးအနှုန်းများအတွက်သုတေသီမှကုန်ကျဆိုလို။ ထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်ငါသင်စုဆောင်းရေးသင်တန်းသားများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌လိုချင်တာတွေလုပ်ဖို့စွမ်းရည် Random, ကုသပို့ဆောင်ခြင်း, ရလဒ်များကိုတိုင်းတာခြင်းကိုဆိုလိုတာ။ သရုပ်မှန်အားဖြင့်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ပတ်ဝန်းကျင်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကြုံတွေ့သူတို့အားကိုက်ညီသောအတိုင်းအတာကိုဆိုလိုတာ; မြင့်မားတဲ့သရုပ်မှန်စမ်းသပ်ခြင်းသီအိုရီအဘို့အစဉ်အမြဲအရေးမပါကြောင်းကိုမှတ်သား (Falk and Heckman 2009) ။ ကျင့်ဝတ်ခြင်းအားဖြင့်ငါထစေမည်အကြောင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကောင်းစွာသဘောရိုးသုတေသီများများ၏စွမ်းရည်ကိုဆိုလို။